🥇 ▷ iPhone 11, Pro iyo Pro Max: dib u eegis ayaa gacanta lagu galiyay, Apple waa la qabtay ✅
iPhone 11, Pro iyo Pro Max: dib u eegis ayaa gacanta lagu galiyay, Apple waa la qabtay
Apple ayaa hadda daaha ka rogtay barnaamijkeeda cusub ee iPhone 11, Pro iyo Pro Max, wixii ka dambeeyay markii lagu dhawaaqayay, warbaahinta ugu waaweyni ee Mareykanka ayaa amaanta ku qabtay la qabsashada shirkadda ‘Apple’ tartanka sawirka, iyo dhinaca kale qiimaha, oo wali ah la mid ah sanadkii la soo dhaafay gaar ahaan soo jiidasho leh iPhone 11.
iPhone 11, maalinta ku xigta – Warbaahinta inteeda badan ee joogtay Cupertino intii lagu gudajiray soo bandhigida iPhone 11 iyo iPhone 11 Pro iyo 11 Pro Max waxay ahaayeen Mareykan. Marka waxaan ku soo ururinay dib-u-eegis war-saxaafadeed leh daabacaadooda kulul.
iPhone 11: waa sheyga ugu soo jiidashada badan tirada ugu badan sababta oo ah shaqadiisa iyo qiimaheeda
The iPhone 11 ugu dambeyntii waa casriga casriga ah ee helay amaanta ugu badan. Xaqiiqdii waxaa la soo bandhigay 50 doolar oo ka yar iPhone Xr markii la sii daayay. Waxay sameyneysaa horumar dhab ah sawir qaadista, oo ay kujirto dareeme xagal labaad oo ballaaran, iyadoo bixineysa isla SoC A13 Bionic oo ay iPhone kale sii deysay sannadkan, oo sidaas darteed, qaybta ugu badan, astaamo isku mid ah. Dhamaan noocyada kala duwan ee midabada acid soojiidashada leh.
Engadget: had iyo jeer waa raqiis iyo tartiib
Sida laga soo xigtay Engadget, “tani waa wararka ugu fiican ee telefishankan dhex-dhexaadka ah (safka Apple, ed) waxay noqon kartaa qiimaheeda. Waxaa lagu soo bandhigi doonaa $ 699 markii amar-bixinnada la furi doono subaxnimada Jimcaha 8-da aroornimo. ET – waa 50 doolar wax kayar qiimaha XR markii la siidaayay.
Mashable: Apple Raadinta si loo gaaro dad badan intii suurtagal ah
Asxaabteena Mashable waxay rumeysanyihiin in xaqiiqada dhabta ah ay tahay shaki la’aan iPhone 11 – oo ugu dambeyntii ku soo kordhineysa sheeko cusub magaceeda: “Xaqiiqda ah inApple Markale, badalida magaca la magacaabay waa inay kugu filnaato inaad ka fahanto sida ay muhiimka u tahay taleefanka casriga. Haa, iPhone 11 Pro aad ayuu qaali u yahay wuxuuna leeyahay xaashi xog aad u xiiso badan, “way garteen.
Kahor intaadan cayimin: “Laakiin qaar badan oo ka mid ah cusbooneysiinta ugu muhiimsan – A13 Bionic SoC cusub, iyo dareeme xagal ballaaran oo ballaadhan – ayaa ku yaal labada aaladood. Marka lagu daro Appleangan, ayaa markii ugu horreysay hoos u dhigay qiimaha mid ka mid ah Banaanbaxyada iyadoo aan loo sadqeyn xajmiga ama astaamaha. Blog-ga ayaa ku soo gabagabeeyey: “dhamaadka u jooji waxaa iska cad in iPhone 11 loogu talagalay in lagu gaaro dadka ugu badan ee suuragalka ah. Iyo isbeddello waaweyn marka la barbar dhigo iPhone XR, waxay umuuqataa meel adag si ay u qaado taajkii iPhone-ka xiga ee ugu caansan.
Techradar: mid ka mid ah iPhone-ka ugu jaban sannadihii ugu dambeeyay
Techradar wuxuu si gaar ah ugu adkaysanayaa hoos u dhaca qiimaha – oo ah dhaqan aan caadi aheyn oo ka dhaca Apple: “iPhone 11 waa mid ka mid ah kuwa ugu jaban iPhone-ka sanadihii la soo dhaafay, waxaana jira dad badan oo adeegsadayaasha ah oo soo jiidan doona xaqiiqda ah inaad hadda iibsan karto iPhone cusub oo cusub. wax aad uga yar 999 doolar oo dad badani ay filaneyn lahaayeen ”.
iPhone 11 Pro iyo 11 Pro Max: in kabadan farqi weyn, wax soo saar kala guur
Inta badan warbaahinta kama aysan farxin iPhone 11 Pro iyo Pro Max. Qaar waxay ogaadaan in wararka yar yar ay siinayaan aragti yar oo ku saabsan kala-guurka iPhone, si faneed cusub oo runtii ah mid weyn – si ka duwan iPhone X, tusaale ahaan, markii la siidaayay. Qaar kale waxay ku arkaan iPhone-ka inuu yahay mid lagu qabanayo tartamada Android ee sawirka. Kuwa kale kama soo kabtaan dibedda laba jibaaran iyo godadkeeda waaweyn ee kicin kara cabsi-cuqdadeedka.
Engadget: IPad 11 Pro hadda wuxuu leeyahay 4 ama 5 saacadood oo dheeraad ah oo iskiis ah
Waa Engadget kii aan ku leennahay oraahda ah “Wareega iPhone”: “Daacad ahaan, aragtida igu soo dhacda markaan arko iPhone-kaani waa inaan ku jirnaa nooc xilli kala guur ah, kuwo kalena waxay soo jeediyeen in isbeddelada waaweyn ee dhabta ah ee ku dhaca iPhones waa sanadka soo socda. Way aniga igu habboon, runtii – Apple waxay qaadan kartaa waqti in la fahmo waxa dadku ay ka doonayaan IP Pro, iyo halkaa, ”ayuu yidhi weriyuhu, ma aha bilaa xariif.
Verge: iPhone 11 Pro wuxuu qabtaa tartanka Android
Dhanka Verge, Apple waxay bixisaa sanadkaan aragtida ah in la ordo ka dib tartammada Android: “iPhone 11 Pro wuxuu leeyahay ama ka yar yahay isku duubni marka loo eego astaamaha muuqaalka tartanka, iyo kuwa qalabka ‘iOS’ ee u gudbiya. iPhone-kan gudaha shaki la’aan wuxuu ku farxi doonaa dareemahiisa xagal cusub ee xagjirka ah iyo qaabkiisa habeenkii .. Laakiin guud ahaan, garan mayno haddii Apple runtii ku soo noqotay wakhtigii sawirada sawirada iPhone ay ahaayeen kuwii ugu fiicnaa markii aan yeelan doono cusub. aaladda gacanta ku jirta.
Gizmodo: Apple counter attack
Sheeko la mid ah Gizmodo: «Apple gabi ahaanba waxay ka dambaysay inta badan la tartamayaasheeda ugu weyn marka laga hadlayo qalabka sawirka. Google ayaa ka sarreysay sawirka habeenkii kahor Apple, Huawei iyo Samsung sidoo kale waxay ku garaaceen sedex jibaax oo kor u kaca ah. Laakiin Apple counter-attack ugu dambeyntii, iyo iyada oo aan weli ogayn sida ay shirkaddu ugu guuleysatay ka hor inta aan runtii tijaabin karin 11 Pro iyo Pro Max waxaan horeyba u ognahay wax wax ka jira: Apple waxay sameysaa wax kasta oo suurtogal ah si ay u daneynayaan dareemayaasha taleefannada casriga ah. . Sidaa darteed ayuu xoogaa kor u kacay.
Lifehacker: kama baxsan doontid koritaankaan
Lifehacker kama soo kabanayso naqshadda moodeelka sawir ee gadaal iPhone-kaan. Saxafiyiintu waxay ogaadeen in dareemayaashan waaweyni ay ka careysiinayaan, sidey ugu dambeysay Mac Pro-ka dhabta ah ee cabsi-gelinta dhabta ah ee godadka. Ha u ogolaan banaanka xaddidan: “Way dheer tahay. Ma baxsan doontid. Ballacaadu way ku mashquuli doontaa. Ballacnaantu aad uma xuma. Waxay sidoo kale ku jirtaa iPhone 11 sida iPhone 11 Pro, laakiin Baahida loo qabo barnaamijka ayaa umuuqata mid muuqata oo mahad leh sedexda dareeme ee ku qulqulaya bannaanka, iyo go’aankaApple ee lagu daboolayo galaas dhalaalaya. Farqi (naqshadeyn) inta u dhexeysa iPhone 11 iyo iPhone 11 Pro. “
Wargeyska Wall Street Journal: Qiimaha joogtada ah marka la barbar dhigo jiilka XS
Jariiradda Wall Street Journal waxay ku qiyaaseysaa in iibinta iPhone 11 Pro iyo Pro Max ay sii ahaan doonaan xishood, laakiin waxay soo dhaweynayaan xaqiiqda ah inApple uu kusii nagaan doono isla qiimaha kuwii iPhone XS: “Apple malaha badankood iibin doonaan iPhones marka loo eego sanadkii hore, laakiin Shirkadda ayaa ugu dambeyntii siisay sababa badan oo ay macmiisha u joogaan. ku kharash garee $ 1,000 ama ka badan macaamiisha suurtagalka ah.Laakiin qiimayaashani waxay la mid yihiin kuwa la midka ah qaab-dhismeedka sare ee sanadkii la soo dhaafay.